Ahoana no fomba amam-panafarana vokatra malaza amin'ny Amazon?
Amazon dia sehatra lehibe indrindra manerantany e-varotra manerantany izay ahafahan'ny olona an-tapitrisany manerantany mampiasa ny zavatra ilainy. Amazon dia manampy ireo mpivarotra hanangom-bola amin'ny tsy misy. Eto ianao dia tsy mila manangana tranokala na mampiasa vola amin'ny fanatsarana anao. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny hanomezana ny mpanjifanao vokatra tsara sy ny fanohanan'ny mpanjifa. Ny hany zavatra ilainao hijerena dia ny lisitry ny fanamafisana ny lisitry ny Amazon - tours paracas huacachina lagoon. Mety hitondra fitaterana fifamoivoizana any Amazonia i Amazôna raha toa ka noforonina araka ny filazan'ny Amazon izy ary manampy ireo mpampiasa handray fanapahan-kevitra hividy. Raha te hanintona ny fifamoivoizana mivezivezy amin'ny lisitry Amazon ianao, dia mila mitadidy fitsipika fototra iray ianao - ny antsipiriany bebe kokoa momba ny vokatrao omenao, ny avo indrindra aminao dia hizara amin'ny Amazon SERP. Ny fifandraisan'i Amazon dia misy fahasamihafana amin'ny fifamoivoizana Google. Ireo mpampiasa izay mikaroka vokatra sasany amin'ny Amazon dia manana fikasana mazava hividy zavatra. Tsy mikaroka an'i Amazon izy ireo amin'ny tanjona mba hahazoana vaovao. Ny tahan'ny fihenam-bidy tsara amin'ny Amazon amin'ny pejy amazonin'ny Amazon dia heverina ho 15%. Intelo avo lenta noho ny sehatra elektronika hafa. Azo hazavaina amin'ny fividianana saina amin'ny fisavana Amazon.
Na izany aza, amin'izao fotoana izao, tsy ampy ny manangana ny raharaham-barotra amin'ny Amazon. Mba hahatonga ny ankamaroan'ny fifamoivoizana, dia mila mahazo antoka ianao fa ny lisitry ny vokatra dia tsara alaina ary ny fampielezan-tsarinao ho an'ny tombontsoanao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fampivoarana ny fivoarana ao amin'ny lisitry Amazon.
Lohateny an-tsoratra ho toy ny iray amin'ireo lafiny fototra izay mahakasika ny mpitsara mpampiasa
Raha mamorona ny lisitry Amazon ianao dia tokony handinika manokana ny lohateninao Izy io no zavatra voalohany ahitan'ny mpiseraseran'ny fikarakarana ny fikarohana amin'ny Amazon. Amin'ny ankapobeny, ny lohateny dia milaza ny olona ny momba ny vokatrao.
Raha efa nanao fikarohana momba ny vokatra Amazon taloha ianao, dia tokony ho voamarika fa ny ankamaroan'izy ireo dia manana lohateny lava sy mamaritra izay ahitana ny toetra sy ny tsipiriany rehetra..Manana karazana 250 ianao mba handefa fanazavana sasantsasany momba ny vokatrao sy ny teny fanalahidy tianao hotratrarina. Ny singa tena ilaina izay azo antoka fa tokony ampidirina ao amin'ny anaram-boninahitrao dia anarana marika, anarana ny vokatra azy, ary ny endri-javatra manavaka, toy ny loko, habeny na fampiasana.
Zava-dehibe ny tsy hameno ny lohateninao amin'ny teny fanalahidy satria tsy ho azo vakiana izy ary hahita spammy. Ny vahaolana tsara indrindra amin'ilay lohateny azo tso-po dia azo vakina, manentana, manonona anarana izay milaza amin'ireo mpampiasa ny vokatrao avy hatrany.
Sary toy ny fitaovana ara-pihetseham-po amin'ny Amazon
Ny lafiny lehibe hafa amin'ny pejy fananganana Amazon product dia sary. Ny sary dia afaka mandefa mpividy mba tsindrio eo amin'ny lisitrao na mitazona horonam-peo. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia matahotra ny mividy tsena amin'ny aterineto satria tsy afaka mamaritra ny kalitaon'ny vokatra azony izy ireo. Na izany aza, ny fivarotana an-tserasera dia manome tombontsoa maro hafa toy ny vidin'ny fifaninanana, ny famokarana tanterahana, ary ny fividianana fividianana. Mba hanomezana ny mpanjifa mety indrindra amin'ny fanandramana fividianana tsara indrindra, dia mila manana sary tsara tarehy sy matihanina amin'ny vokatrao ianao. Tokony hanana fahafahana handinika ireo vokatrao amidinao amin'ny sehatra samihafa izy ireo.
Ny Amazon dia mitaky ny fanarahana ny fitsipika momba ny sarin'ny vokatra araka izay tokony hampidirin'ny sary anao ny vokatra azonao, amin'ny fotsy fotsy tsy misy singa fanampiny ao aminy. Ny sary maina dia tsy tokony ahitana fitaovana izay tsy tafiditra ao amin'ny fividianana ary koa ny teny filamatra sy ny marika famantarana toy ny "natao tany Etazonia" sy ny hafa. Ankoatra izany, i Amazon dia mitaky fa ny sary dia farafahakeliny 1 000 pixels amin'ny 1, 000 pixels mba hanararaotra ny fampiasana ny zoom. Noho izany, raha azo atao, dia azonao ampiasaina avo kokoa ny famahana ny tombon-tsoa fanampiny.
Manao ahoana ny fomba amam-panao ny vokatra Amazon anao?
Ireo mpividy izay tsy resy lahatra amin'ny anaram-boninahitrao sy ny sarinao dia mety ho voasariky ny bala. Manana toerana dimy ho an'ny bala amin'ny Amazon ianao, izay ilainao hampiseho ny tombontsoa sy ny toetranao amin'ny vokatrao. Mba hampitomboana ny fahombiazan'ny bala, azonao atao ny mampiasa fehintsoratra fohy amin'ny fehezanteny roa ka efatra..Eto dia azonao atao ny miresaka amin'ireo olana iraisana izay mety mahatonga ny olona tsy hividy. Ohatra, raha nahamarika fitarainana sasantsasany tao amin'ny fanamarihanao ianao, alamino ny balambanao mba hamaly izany. Manaova fanamiana momba ireo bala telo voalohany rehefa manintona ny fisainan'ny ankamaroan'ny mpiserasera izy ireo ary manampy azy ireo handray fanapahan-kevitra hividy.
Zava-misy iray hafa izay ahafahanao mampitombo ny lazanao Amazon ny vokatrao dia famaritana. Izany no farany ahafahanao mamadika mpikaroka any amin'ny mpanjifanao mandoa anao. Matetika ny mpisera Amazon no manadino ny fanoritsoroana ny vokatra satria manome fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra azony hividianana izany. Izany no antony ilainao hahazoanao antoka fa mahaliana ny famaritana ny vokatrao momba ny famakiana, famaritana ary ilaina. Eto dia azonao atao ny mampiasa marika HTML marika mba hanasongadinana ireo teny na andian-teny manokana ary hanamora ny famakiana ny fanazavanao. Amazon dia manome tarehimarika 2 000 ho ampiasaina amin'ny famaritana vokatra. Tsara ny mampiasa ny tarehintsoratra rehetra mba handresena lahatra ny mividy ny vokatrao.
Ny fiheveranao ny mpanjifa dia misy fiantraikany goavana eo amin'ny pejin'ny pejy anao ary tokony ho iray amin'ireo eritreritra ambony indrindra momba anao. Misy fiantraikany amin'ny vokatra misy ny lisitry ny lahatahiry amin'ny alàlan'ny fanombohan-kintana avo lenta izay miseho eo akaikin'ny vokatra ao amin'ny valin'ny fikarohana sy eo an-tampon'ny pejy antsipirihany. Raha mihoatra ny 4 ny salan-kintana isam-baolinao, dia manana tombony ianao ho lasa iray amin'ireo vokatra Amazon malaza.
Ny fizaham-pijery malaza indrindra dia napetraka eo amin'ny pejy havia eo amin'ny pejy Amazon ary manolotra ny faritra ahitana fanamarinana amin'ny vokatra izay nifidy "eny" ho fanampiana matetika. Tsy azonao atao ny mandefa any Amazona izay hevitra mivoaka ao amin'ity fizarana ity ary tsy izany. Na dia izany aza, ny fanehoan-kevitra 4 sy 5-kintana dia miseho amin'ity fizarana ity, ny fihenan'ny fivoarana sy ny fivarotana ambony kokoa.
Ny toerana farany ahitana ny fanehoan-kevitra dia mety hisy fiantraikany amin'ny lisitra iray dia ny "mpitsidika farany indrindra momba ny mpanjifa". Ity fizarana ity dia ahitana ny fanamarihana farany ary tsy misy fiantraikany amin'ny safidiny. Raha tsara daholo ny mason'ny mpanjifa anao, ny Amazon searches dia mety hanaiky ny marika ho azo itokisana ary lasa mpanjifanao.
Izany no antony hametrahana ny vintanao ho an'ny fivarotana mahomby amin'ny Amazon; Mila mandinika tsara ny hevitrao ianao ary miezaka manampy ny mpanjifanao.